Maqaalkani waxa uu idin tusiyo 10-eryi Flash Secure, kuwaasoo ka caawin kara in aad si aad u ilaaliso files muhiim ah ama gaarka ah ka baxsiga.
Secure flash drives lagu horumariyo amniga users miyir qabo in la hubiyo in ay qaado sort xasaasi ah ama mid ka mid ah macluumaadka aan walwal kasta oo sida adag drives xirto hoos xogta ka dibna gaadiid uu noqdo mid fudud oo fudud. Waxaa sidoo kale in la xuso in codes gundhig iyo xirfadlayda ammaanka mar xadgudub ku aamin flash drive waxay keeni doontaa in tirtirka xogta oo sidaas daraaddeed tuugu ma awoodi doonaan in ay ka heli wax gal nidaamka waana mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka hawlaha farshaxanka la soo baxay drives kuwan.
10 ammaan ah loo jecel yahay flash drives
Hoos waxaa ku qoran sare toban drives flash aamin ah in lagu qiimeeyo by users ee qaybaha kala duwan iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in ugu fiican ayaa la siiyaa marka la eego ammaanka xogta:
1. Iron Key D200 shakhsi
Rating hadalladiisa iyo xiddigaha
Dawladda design farshaxanka iyo naqshada ma aha oo kaliya sidhab ah xogta laakiin waxa kale oo u xaqiijiso in ay marna waa la heli karo. Waa sabab la mid ah in qalabka la soo qiimeeyo sare by users iyo waxa ay doonayaan in ay u heli baahida shakhsi ahaaneed.
2. Kanguru Daafaca Elite
Rating waa erayada iyo xiddigaha
Shaqeynta guud ayaa loogu talagalay si loo hubiyo in user helo gobolka farshaxanka iyo barnaamijka si aad u wanaagsan rug in sidoo kale sir doonaa xogta ka soo hadhay u badbaadiyo. Qof walba waa ogyahay in ay tahay wax aan macquul aheyn in la hubiyo in sirta AES ah waa la dumiyey.
3. SanDisk ba'an dusha
SanDisk sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka shirkadda ilaalinta xogta tahay in uu horumariyo gabal sayidkiisa this. Validations ammaanka ayaa horumariyo guriga iyo shirkadda ayaa sidoo kale xaqiijiyey in user helo ugu fiican ee ka soo baxay waxyaabaha la baxsho waxaa iyaga arrintan la xiriira.
4. Disk Go mas'uulka ammaan
Sidoo kale waa mid ka mid ah asaxaabta ugu wanaagsan ee dhammaan dadka isticmaala kuwa doonaya in ay hubiyaan in ay xogta ammaanka iyo waqtiga oo dhan aamin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in drive waxaa loo isticmaalaa sida buuga in yimaado oo ay la socdaan in ay ka fogaadaan wax kasta oo arrinta iyo dhibaato sameeyo.
5. Xogta Socotada yiri- Privacy Edition
Waxaa la horumariyo by Kingston Inc. in mar walba lagu yaqaano ee ugu fiican oo gobolka ka mid ah waxyaabaha tahay marka la eego keydinta xogta, bedqabka iyo ammaanka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ku tahay in uu qaato ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay oo kaliya haddii drive waxaa loo isticmaalaa sida ay nooc ka dhigi doontaan oo ay u la soo saaro. The sirta xogta gundhig weliba hubinayaa in xogta la sii xaqiijistay.
6. Jump Drive II Secure oo lagu daray
Waxaa la soo qiimeeyo sare sabab u ahaa xaqiiqada ah in qiimaha u yar yahay iyo meel lagu kaydiyo ee arrintan la xiriira waxaa ku filan si loo daboolo baahiyaha iyo baahida user. Waxaa sidoo kale in la xuso in drive ayaa la soo saaray iyadoo Lexar Inc. ah in la og yahay adeegyada ay sirta xogta. Waxa intaa dheer in codes baas iyo farsamo kale oo ammaanka drive ay sidoo kale Windows XP, adeegyada sirta macluumaadka si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si user ah in arrintan la xiriira.
7. cadayn EHP
Waxa kale oo gabal casriga ah cabsi badan tan USB ammaan hubiyaa in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in user ee arrintan la xiriira oo ay xogta ammaanka iyo waqtiga oo dhan aamin. Waxaa sidoo kale in la xuso in la socotid USB 3.0 interface inkastoo of isagoo amaan iyo xawaare kala iibsiga iyo layaab sare taas oo ay doorashada ugu horrayn waxa weeyi ee user ee arrintan la xiriira ka dhigaa.
8. Kanguru Daafaca 2000
Waxaa mar kale waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in la socotid sirta AES. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira ayaa sidoo kale ka dhigi kartaa hubiyo in xogta la wareejiyo xawaare xad hoose marka loo eego qaadashada tusaalayaal kale oo ay u sabab tahay xaqiiqda ah in USB 3.0 interface aan ay taageerayaan drive this.
9. Kingston Data Socotada 4000
Sida xogta si dhakhso ah oo la awoodi karo safarka xal dheegato USB waxa sidoo kale xaqiijistay la s sirta badan sida user uu jecel yahay. Rating sare sidoo kale waa sababta oo ah magaca Kingston iyo isku halaynta ah oo ay mar walba muujiyey marka ay timaado alaabta ay.
Apricorn-gelisay 10. Key Secure
Diyaar u samatabbixin ugu fiican u isticmaala drive USB ah sidii la arkay in la password gacanta ilaaliyo karo iyo macluumaad sidoo kale laga xiraa karo si loo hubiyo in adeegyada ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah. Rating guud ee wax soo saarka ayaa sidoo kale muujinaysaa in ay tahay sida ugu fiican oo gobolka waslad tahay in la soo saaro ka.
Siyaabaha la isu wanaajiyo ammaanka xogta
Ka dib waxaa ku qoran nasteexo user waa ku kor u dhaqmaan si ay u hubiyaan in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helaa:
1. Khatarta waa in aan marnaba la dhayalsan iyo eegin qiyaasteeda size iyo maamuus ku habboon waa in la qaadaa si ay gabi ahaanba meesha laga saaro.
2. Halkee khataraha soo baxaya waa in la tixgeliyaa user waa in aan marnaba iska indha in kuwa hore weli way shaqeeynayaan iyo sidoo kale waa in ay la hubiyaa in.
3. socodka Advanced iyo nidaamka jaridda waa inay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka lagu dabaqo deegaanka user iyo meelaha jajaban iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa xogta la wasakheeyey in sida uga wanaagsan ee suurto gal u ogolaanaya shirkadda inay qaadaan tallaabo degdeg ah ka hor dhaawaca ayaa la sameeyey.
Garmin USB Ant ul Recovery dib u soo ceshano Khasaaray Waxqabadka Data
> Resource > Flash Drive > Top 10 Flash Secure Drive ammaanka xogta aad